Cufflinks & Tie Bars Factory - Mpanamboatra sy mpamatsy bà Cufflinks China
Akanjo manaitra dia tokony miaraka amin'ny cufflink na fehy fehy manokana. Izy ireo dia fanomezana tsara indrindra ho an'ny Fetin'ny ray, fizarana diplaoma, tsingerintaona, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fampakaram-bady na momba ny fanomezana amin'ny fanomezana amin'ny lehilahy rehetra. Ny mpampiasa dia afaka mametraka ny cufflink amin'ny akanjo, lobaka na akanjo ofisialy ho an'ny fampiasana isan'andro na amin'ny fotoana mety, raha tokana kosa ny famafazana pc iray ho fanangonana ny lehilahy tsirairay. Ny Pretty Shiny Gift dia manana traikefa nandritra ny 36 taona tamin'ny famokarana cufflink avo lenta sy fantsom-pifandraisana avo lenta, ny fomba dia mety ho kilasika, lamaody, rendrarendra, tsotra araka izay itiavanao azy. Ny fizotry ny plating sy ny famenoana ny loko dia hitazona ny famirapiratan'ilay entana maharitra, ankoatr'izay, ny endrika vaovao misokatra malaza indrindra dia azonao atao safidy. Famaritana: ● Misokatra famolavolana ho an'ny voafantina ● endrika, fitaovana, habe, loko namboarina ● Loko: miorina amin'ny plating, ambonin'ny sary hosodoko, famenoana loko, fanontana ● Logo: Fametahana, fanariana, sary sokitra, Voasokitra, vita pirinty, epoxy sticker. ● fonosana: kitapo 1pcs / poly, fonosana boaty fanomezana dia misy na mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa
Cufflink mihaja sy kanto